Yabbina wanta filatamee, kan yabbina bal'ina barruu fuulaa akka dhibbeentaatti herreega.
Hojjaa wanta filatamee, kan hojjaa bal'ina barruu fuulaa akka dhibbeentaatti herreega.
Ijaarsa hamamtaa kan wanta filatamee, gatiiwwan xabbootti qindeessa.
Dirqalii kun goodayyaadhaaf hinjiraatu.
Yabbina yk hojjaa goodayyaa tokkoo, qabeentoota goodayyaati walsimsiisuudhaaf ofumaan qindeessa. Yoo barbaaddee, goodayyaadhaaf yabbina gadee yk hojjaa gadee ifteessuu nidandeessa.
Dirqalii Ofumaa kan jiraachuu danda'u, yoo goodayyaa tokko filatte qofa.
Bakka wanta filatamee, fuula ammaa irraa ifteesi.
Bu'aa dirqalaawwan hiriira isa sanduqa durargii keessaa filatte dawwaachuu nidandeessa.
Fuulawwan guutuu irratti ofilaalii
Wanta, goodayyaa hojja siranaa tokkotti yoo korkoddeesiitee, Dirqalawwan hiriiraa "Jala" fi "Wiirtuu" qofaatu jiraata.
Golsirroo magariisi wanta filatameef yammuu dhaabatu, golsirroo diimaan ammoo iddoo wabii hiriira dhabatu. Wanta akka arfii tokkootti yoo korkoddeesiitte, golsirroon wabii gara sarara diimaa tokkotti jijjiirama.
Dhangi'i - Korkoddii
Title is: Akaakuu